Manchester United oo fariin ku aadan arrinta Pogba u dirtay kooxda Real Madrid – Gool FM
(Manchester) 14 Agoosto 2019. Sida laga soo xigtay wargeyska “Mirror” ee dalka England, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa fariin u dirtay Real Madrid, taasoo ku aadan in Paul Pogba uusan iib aheyn xagaagan.
Kooxda Manchester United ayaa xaqiijisay inaysan ogolaan doonin fikirka uu Pogba kaga tagayo garoonka Old Trafford, xitaa haddii laga soo gudbiyo dalab gaaraya 185 milyan ginni.
Pogba wuxuu ahaa dookha koowaad ee macallinka reer France ee Zinedine Zidane, maadaama uu doonayay inuu ku xoojisto khadka dhexe ee kooxda Real Madrid xagaagan xiddig aad u wanaagsan.
Pogba ayaa ciyaaray kulankiisii ugu horreeyay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ee kooxda Red Devils, isagoo ka hor yimid Chelsea, wuxuuna sameeyay laba baas muhiim ah, xili kulankaas ay guul kaga gaareen Blues 4-0.
“Haddii uu Neymar ku biiro Real Madrid, maahan qiyaano uu ku sameeyay Barcelona”